Ngokuqhelekileyo, ubudlelwane obusondeleyo phakathi kowesifazane kunye nendoda luboshwe ngokuchanekileyo kwindoda yomntu. Kodwa, ungatsho, kodwa kungekudala okanye kamva, olu lwalamano luya kulala. Abameli bezesondo ezibuthathaka kakhulu badla ngokuzibuza ukuba yintoni ubuhlobo bobulili obusondeleyo, kwaye ngokuqhelekileyo kubalulekile ukuwela lo mgca phakathi kobuhlobo nobudlelwano obusondeleyo? Kule meko, isikhalazo kakhulu, zombini i-pluses kunye ne-minuses. Ngamagama, wonke umntu unengcamango yakhe. Ngoko ke, sinqume ukuphendula umbuzo onzima: "Ngaba ucinga ukuba ubulili bobuhlobo? "Yaye uphinde ubeke ingxelo kubo.
Ngaphezulu kweyodwa kwathiwa ukuba abameli bezesondo ezinamandla njengamehlo. Apha kwaye kule meko, le ngcamango ifumane ingcaciso. Indoda ayisoze yaqala ubudlelwane obusondeleyo kunye nentombazana engamthandiyo. Kwindoda nayiphi na ubudlelwane, umfazi kufuneka abe mnqabileyo kwaye kufuneka athathwe kuye. Kodwa amantombazana amaninzi, xa uphendula umbuzo: "Ngaba ucinga ukuba ubulili bobuhlobo? "Imithambeka yinto yokuba ininzi yabo ikholelwa kubuhlobo nomntu onokutsalana ngesondo. Kodwa kwiimeko ezininzi, ubudlelwane phakathi kwamalungu esini esahlukileyo buya kwintlobano yesini esingenanto engaphantsi kobungqina bokuba "ubuhlobo". Ngendlela, ungacingi njani ngale nto, kodwa ulwalamano olunjalo luyakwazi, ngamanye amaxesha, ukuphula ubuhlobo obunamandla kunabo bonke kwaye lukhokelela ekuphuleni ngokupheleleyo ubudlelwane.
Kodwa abaninzi abantu bahlala bekholelwa ukuba ubulili bobulili bobulili ngaphandle kokuzibophezela. Akukho mithetho, imisebenzi kunye neemfuneko zokuqhubela ubudlelwane. Ngabo nje "abahlobo" nje babugubungela imvakalelo yeemvakalelo, nto leyo eyabancedisa ukuba bahlale kwibhedi elifanayo.
Yithi cha kwiimimiselo.
Inzuzo ebalulekileyo yobudlelwane bobulili obuhle kubulula ubudlelwane obungabonakaliyo. Ufumana nje iqabane ngokulala ngesini kunye nokuseka ubudlelwane obukhululekile kunye naye, apho kungekho zicinezelo kunye nezithintelo. Kodwa oku kunokwenzeka kuphela ukuba zombini intombazana kunye nomfana angakwazi ukuvavanya imeko ekhoyo ngoku, ukuyiqonda kwaye yamkele yonke imiqathango. Ngendlela, ukuba kwiimeko ezinjalo umntu uceba iziganeko zexesha elizayo, oku kunokuphelisa. Kule nkalo, kukho ubungqina obuninzi ukuba kwiimeko ezinqabileyo kakhulu, ubulili bobuhlobo bubandakanya ubudlelwane obunzulu, nokuba kunoko utshintsho kubo.
Eyathuthuzelayo kwaye efanelekileyo.
Ukunxibelelana okunxulumene okunjalo kuyinto elula kakhulu. Iphantse ilahleke ngokupheleleyo i-"candy-bouquet" yezobudlelwane. Apha akufanele uhambe ngemihla, uzalise izipho omnye nomnye uze ufumane umntu omtsha ngokwakho, ukwazi umhlaba wakhe ongaphakathi. Abahlobo nje bayazi kakuhle iimpazamo zabo, zisetyenzisana kunye kwaye zixhamle kunye. Basoloko behleka iimpazamo zabo, baze bahlanganyele ngemicimbi yabo yothando. Ngendlela, ubudlelwane obunjalo buhle kakhulu kulabo bantu abangenanto yokuthandana kunye nento ehamba nayo.
Ngendlela, ukuba unamathele ubuhlobo obunjalo kwaye awuxhunyiwe kuphela ngumhlobo kodwa kunye nocansi, musa ukuma ngakwesobunxele kwaye unelungelo lokumemezela le meko. Vumela zonke izinto zihlale kuphela phakathi kwabantu ababini. Njengomfana kunye nentombazana, omnye akufanele afune iintlanganiso eziqhelekileyo, ingqwalasela, iifowuni ezihlala zivela komnye nomnye. Okokuqala, qwa lasela, ukuba uqhagamshelwe ngumhlobo, kwaye ngoko kuphela ngesondo.
Ngokuqhelekileyo entloko inokugqithisa ingcamango yokuba ubulili obusondeleyo kunokuqala kwesinye into. Ngokuqhelekileyo, kukholelwa kubameleli besini esilungileyo. Baqala ukwenza izicwangciso zekamva kwaye balindele ukuzaliseka kwabo. Kodwa, njengommiselo, kwiimeko ezininzi le nqophiso yowesifazane ayinakho ukuhambelana nendoda. Ngenxa yoko, kukho izikhalazo ezahlukeneyo nokungaqondani. Ngoko ke, kwisini esinobuhlobo kukuqonda umgaqo omnye wokuba iimvakalelo ziintshaba zobudlelwane obunjalo. Ngoko, ukuba unobungozi malunga nolwalamano olusondeleyo nomhlobo, kufuneka ubalekele izicwangciso zakho zokucinga kunye nethemba. Ngaphezu koko, ukuba ungumnikazi ngokwemvelo, oko akuqinisekanga oko.
Ukwabelana ngesondo kufana nendlela yokulahlekelwa ngumhlobo.
Ukuhlala uhamba ngokulala kunye nobuhlobo, unokugqitywa ngokupheleleyo ubuhlobo. Kwaye oku kunokukhokelela ekubeni amaqabane awanakunxibelelana nabanye. Ngelishwa, ubuhlobo obunjalo buphela. Ngenxa yokuba isondo sinokudiliza zonke iinguqulelo apho ubuhlobo busekelwe khona. Ewe, ukuba uyamxabisa lo mntu njengomhlobo ngaphezu komlingane wesini, ngoko kuyimfuneko de kube sele ihamba kakhulu ukuyeka kwaye uzame yonke into eguqulelwe kuba ngumhlobo.
Uthando nobudlelwane: Yintoni eya kuphuma?
Ngamanye amaxesha abahlobo bahlala bebathandana kwaye baqhubeka bebelana ngokusondeleyo kunye nokunyanisekileyo, njengabo bonke abahlobo abafanayo. Uninzi lwamaxesha amaninzi, indoda kunye nomfazi, izimo zengqondo zixhaswa ngumnqweno wokumazi umhlobo wabo njengomlingani wesini. Kodwa, nokuba yintoni na ebeya kuba khona, kodwa ngaphezu kobuhlobo obusondeleyo bokomoya, lobu buhlobo akunakwenzeka ukuba lunothando. Umhlobo omdala unokwenza olunye usuku kwaye intombazana nentombazana iya kukhumbula yonke into eyenzeka kubo ngobumnandi ebusweni babo.
Ukusuka kuphazamiseka kumlingani, akukho mntu ukhuselweyo, nokuba ngabahlobo, abathandayo. Ngako oko, xa bekhona kwi-pastel enye banokuqonda ukuba ubuhlobo bubaluleke kakhulu kubo. Ngamanye amagama, uyaqonda ukuba kukhululekile ngakumbi ukuba ube ngabahlobo kunokulala ngesondo, kunye nobudlelwane obusondeleyo kuphela yiphutha lakho. Ngendlela, ukuze ufihla le nto, abahlobo bobabini baya kuzama ukuziphatha ngokungathi akukho nto phakathi kwabo.
Amadoda, njengabafazi, bakholelwa ekubeni kukho ubulili obuhle. Kwaye, nangakumbi, bajonga oku kuqhelekileyo. Emva koko, ngokombono wabo, nayiphi na intsebenziswano phakathi kwendoda kunye nomfazi onokuyithanda. Umfana uyinto ebizwa ngokuthi "wanika i-slabinka" kwaye wakhangela umhlobo wakhe-intombazana ehlukileyo amehlo. Ngokuqhelekileyo, amadoda athambekele ekungqineni ukuba emva kokulala ngokwesondo, unokuqhubeka ngokuqhubekayo ubuhlobo bakho ngaphandle kokuzisola kunye netyala.
Wena ungumhlobo wam, umthandi kunye nomhlobo osondeleyo ...
Oko kungathethi, kodwa kusekho isini ngaphantsi komxholo othi "ubuhlobo". Yaye unokuphelisa oko waqala-ubungane. Into ephambili kule meko kukuba abahlobo baye bafunda kwelinye icala. Olu luthando lunokuhlala ixesha elide elinye iqabane lingenalo uthando lokwenene ebomini ngokwalo, libuyise yonke into eyayisendaweni yayo. Khumbula ukuba into ephambili kukuqonda, kwaye kuphela ubuhlobo bakho buya kukwazi ukumelana novavanyo olunjalo.
Inzala yomntu wesilisa otshatileyo
Imithetho yesondo ngobunye ubusuku
Impilo yabasetyhini kunye nokuzibandakanya ngokwesondo
Izidlo ezonaMnandi kakhulu
Ubomi emva komtshato
Indlela yokunciphisa intlungu kwi-pancreas?